စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက ဘာများဖြစ်မလဲ
ပရိသတ်တွေ သတိမပြုမိလောက်တဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံ အပိုင်း(၂)
17 Nov 2018 . 6:16 PM
ဘောလုံးအားကစားကို အရူးအမူးအားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကစားသမားဆိုတာ ရှိစမြဲပါပဲ။ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ၊ ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င်ကြီး ဇီဒန်း Zidane တို့ လက်ထက်က စပြီး အခု မက်ဆီ Messi ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့ အထိ ပရိသတ်တစ်ဦးချင်းစီမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်တဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကို သတိပြုမိကြရဲ့လား။
ဥပမာ ဒိုကြီးလို့ ကျွန်တော်တို့ နာမည်ပြောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကို ပြောပါဆိုရင် နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ ဒိုကြီးရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Ronaldo Luís Nazário de Lima ပါ။ အဲဒီလိုပဲ တခြား Super Stars ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကို ပရိသတ်တော်တော်များများ သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရစေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . .
မက်ဆီ နောက်ပိုင်း အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးလောကကို ဦးဆောင်နိုင်မယ့်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး ဒီဘားလား Paulo Dybala ကို နိုဝင်ဘာ (၁၅)ရက်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ Adolfo Dybala နဲ့ Alicia de Dybala တို့ဟာ သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေ ဖြစ်ပြီး မူလဇာတိက အီတလီကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘားလားဟာ ၂၀၁၂ တုန်းက အီတလီနိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘားလားရဲ့ နာမည်အပြည့်စုံက Paulo Bruno Exequiel Dybala ဖြစ်ပြီး မိသားစုက မချမ်းသာပေမယ့် ဒီဘားလားကတော့ စိတ်ဓာတ်၊ ခွန်အားအပြည့် ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိရောက်ရောက် ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။
ပီလီ Pele ၊ ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ၊ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို Ronaldinho တို့နောက်ပိုင်း ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးလောကအတွက် ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ နေမာ Neymar Júnior ရဲ့ ဘ၀မှာ သူဖခင်က အဓိက ကျခဲ့တယ်။ Neymar Santos Senior နဲ့ Nadine da Silva တို့ရဲ့သားဖြစ်သူ နေမာရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Neymar da Silva Santos Junior ပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူက ဘောလုံးသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် နေမာဟာ အဖေ့ခြေရာနင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အဖေထက်ပိုပြီး ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နဲ့ PSG အသင်းတို့ရဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဘာပေ Kylian Mbappé ဟာ အသက်နဲ့ မလိုက်အောင် ဆုဖလားတွေ အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့သူပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူ Wilfred Mbappé ဟာ ကင်မရွန်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပြဖြစ်သလို ဘာပေရဲ့ အေးဂျင့်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်တဲ့ Fayza Lamari ကတော့ လက်နဲ့ပစ်သွင်းရတဲ့ Handball ကစားသမားဟောင်းဖြစ်ပြီး ဇာတိကတော့ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသူပါ။ ဘာပေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Kylian Mbappé Lottin ဖြစ်ပြီး ဒီနာမည်ကို သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာရင်းမှာ မပါမဖြစ်ကတော့ ဘောလုံးမင်းသား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ပါပဲ။ ရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတဲ့ အမည်ဟာ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ဒိုကြီးကို အစွဲပြုပြီး သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ မိဘတွေက အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Ronald Reagan ကို နှစ်သက်သူတွေဖြစ်လို့ အဲဒီနာမည်ပါအောင် နောက်ဆုံးနာမည်ကို ရော်နယ်လ်ဒိုလို့ ပေးခဲ့တာပါ။ မိဘတွေဖြစ်တဲ့ Jose Dinis Aveiro နဲ့ Maria Dolores dos Santos တို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကနေ ဖြစ်တည်လာသူ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ငယ်ဘ၀က ကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအမာခံ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ဖြစ်ပြီး ဖခင်နောက်ဆုံးနာမည် Aveiro ၊ မိခင်ရဲ့ dos Santos ကို ယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုပါရင် မက်ဆီ Lionel Messi ကိုလည်း ချန်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ မက်ဆီရဲ့ မိဘ နာမည်က Jorge Messi နဲ့ Celia Cuccittini တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူ Jorge Messi ဟာ စတီးလ်စက်ရုံက မန်နေဂျာဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်တဲ့ Celia Cuccittini ကလည်း သံလိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ မိသားစုက စပိန်၊ အီတလီအဆက်တွေဖြစ်လို့ သူ့နာမည်ကိုလည်း စပိန်ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ဖခင်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးနာမည်ကို ထည့်သွင်းပြီး Lionel Messi Cuccittini လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်အားပေးတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံနဲ့ နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် သိသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲမှာလည်း မသိတဲ့သူတွေရှိရင် လက်တို့ပေးကြပါဦး . .
Photo:Pinterest,Twitter,You Tube,Sports Illustrated,